आज २०७५ भदौ ३ गते तपाईको दिन कसरी व्यतित हुदैँछ ? हेरौँ रासीफल – Saurahaonline.com
आज २०७५ भदौ ३ गते तपाईको दिन कसरी व्यतित हुदैँछ ? हेरौँ रासीफल
परिवेश उल्लासमय रहे पनि जीवनशैली व्यस्त रहनेछ। प्रतिष्ठा एवं लोकाचारका लागि अनावश्यक काममा जुट्नुपर्ला। चिताएको काम अधुरो रहला। समस्या पर्दा साथ दिनेहरू थोरै हुनेछन्। तापनि प्रेम र मित्रताको बन्धनले परोपकारी काममा जुटाउनेछ। अतिथिका रूपमा मानसम्मान समेत प्राप्त हुनेछ। रमाइलो यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ।